Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 25/05/2018 (english+myanmar version)
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 25/05/2018 (english+myanmar version)
ARSA’s massacres of Hindu villagers make headlines in int’l media
Naypyitaw, May 23
Amnesty International releasedareport on 22 May stating that new evidence had revealed ARSA terrorists massacred scores in Rakhine State, with the report hitting the headlines in international media on 23 May.
Voice of America (VOA) aired the news titled “New evidence reveals ARSA terrorists massacred scores of Hindus in Rakhine State, says Amnesty International” in its6a.m. broadcast on 23 May.
The VOA broadcast quoting the Amnesty International said that the ARSA armed group, brandishing guns and swords, was responsible for the massacre of up to 99 Hindu women, men, and children, as well as the additional unlawful killings and abductions of Hindu villagers in August 2017.
The BBC also broadcast its interview with Laura Haigh, member of the Amnesty International. In the interview, Laura Haigh said Amnesty International found that 99 Hindu women, men, and children were killed in Kha Maung Seik Village by ARSA terrorists, and another six Hindus were also killed by ARSA terrorists inaseparate massacre. The ARSA terrorist group is responsible for the killings, said Laura Haigh.
The revelation by the Amnesty International made headlines in foreign media, including in Al Jazeera, CNN, AFP, CNA, FOX News Channel, Sky News, The Straits Times, The Guardian, Daily Mail, The Daily Star, The Independent, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Times of India, TIME and Bangkok Post.
Union Minister U Thaung Tun objects Bangladesh’s activities near the borderline
Union Minister for the Ministry of the Office of the Union Government and National Security Advisor U Thaung Tun called in the Ambassador of the People’s Republic of Bangladesh to Myanmar Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury on 23 May 2018 and handed him an aide memoire regarding the security situation on the border between Boundary Pillar 34 and 35.
The Union Minister reiterated the objection lodged earlier by Myanmar concerning the building of bunkers by Bangladesh near the border line in the No-construction Zone. The Union Minister said that bricks and other construction materials from the Bangladesh side are now being brought in to the border area, and pointed out that it can adversely affect the security situation.
The Union Minister called on Bangladesh to remove the bunkers and to prevent the construction. The Union Minister also called upon the Bangladesh side to comply with the provisions contained in the bilateral agreement and prevent activities that may create misunderstanding between the two sides.
Media group in Maungtaw departs from Sittway
Sittway, May 23
An independent media group departed for Taung Pyo Letwe Reception Centre on 23 May where the center’s Deputy Director provided information about the camp and explained the repatriation processes to them.
Next, the media group went to the Myanmar-Bangladesh Friendship Bridge and questioned immigration officers about issuing national verification cards, gathering biometric data, and the repatriation processes. Later, the media group arrived near the border between the two countries to gather news and interviewed people living in the border area. In the afternoon, the media group departed for Yangon.
ARSA ၏ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာများ ရေးသားဖော်ပြ
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အုပ်စုက လူအစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ် ခဲ့ကြောင်း အထောက်အထားအသစ်အရ သိရသည်ဟူသည့် ခေါင်းစဉ်ဖြင့် Amnesty International အဖွဲ့က မေ ၂၂ ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းအပေါ် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများက ထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
VOA သတင်းဌာနက မေ ၂၃ ရက် နံနက် ၆ နာရီ သတင်းအစီအစဉ်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဟိန္ဒူဘာသာဝင် အမြောက်အမြားအား ARSA အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့က သတ်ဖြတ်ခဲ့ သည်ဆိုသည့် အထောက်အထားတွေ့ရှိရကြောင်း Amnesty International အဖွဲ့ ပြောကြား ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ARSA အဖွဲ့က ခမောင်းဆိပ်ကျေးရွာ အနီးတွင် ဟိန္ဒူအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် ကလေးငယ် စုစုပေါင်း ၉၉ ယောက် ခန့်အထိ သတ်ဖြတ်ခဲ့သလို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုများလည်း လုပ်ခဲ့သည်ဟု VOA သတင်းဌာနက Amnesty International အဖွဲ့ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကို ရည်ညွှန်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အလားတူ ဘီဘီစီသတင်းဌာနကလည်း Amnesty International အဖွဲ့မှ လော်ရာဟေ့ဂ် ဆိုသူ အမျိုးသမီးအား တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ ၎င်းက မောင်တောမြို့နယ် ခမောင်းဆိပ်ရွာတွင် ဟိန္ဒူ ၉၉ ယောက် အထိ အသတ်ခံခဲ့ရပြီး မောင်တော အပြင်ဘက် သီးခြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုတွင်လည်း အသတ်ခံခဲ့ရသည့် ဟိန္ဒူ ၆ ယောက်ရှိသည်ဆိုသည့် အထောက်အထား သက်သေများကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကျူးလွန်သူများသည် ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ကြောင်း ဖြေကြားခဲ့သည်ဟူသည့် သတင်းကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Aljazeera, CNN, AFP, CNA, FOX News Channel , Sky News , The Straits Times, The Guardian , Daily Mail, The Daily Star, The Independent, The Wall Street Journal , The Washington Post, The Times of India , TIME, Bangkok Post စသည့် ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများကလည်း ထုတ်လွှင့်ဖော်ပြ ထားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်မှ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် ကန့်ကွက်ပြောကြား
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေး အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်းသည် မေလ ၂၃ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Manjurul Karim Khan Chowdhury အား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မှတ်တိုင် အမှတ် (၃၄) နှင့် (၃၅) အကြား နယ်စပ်လုံခြုံရေးရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးကာ သတိထောက်လွှာကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီးရှိ တားမြစ်ထားသည့် ဧရိယာအတွင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံက ဘန်ကာများ ဆောက်လုပ်ထားမှုအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံက ကန့်ကွက်ထားခဲ့သည့်ကိစ္စအား ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ အုတ်များ၊ ဆောက်လုပ် ရေး ပစ္စည်းများအား တားမြစ်ထားသည့် ဧရိယာသို့ သယ်ဆောင်လာနေမှုများ ရှိနေသည်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီးအား ထောက်ပြခဲ့ပြီး ယင်းလုပ်ရပ်သည် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်လုံခြုံရေး အပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ဘန်ကာများ ဖယ်ရှား ပေးရေးနှင့် အခြားအဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်မှုကို တားဆီးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာ သွားရန်နှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြား နားလည်မှု လွဲမှားစေမည့်လုပ်ရပ်များ လုပ်ဆောင်ခြင်းမှ တားဆီးပေး ရန်လည်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။